नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषाल एमालेका नेतामात्र होइनन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गारेटोबाट नयाँ मूलबाटोमा ल्याउने एउटा अध्येताका रुपमा पनि परिचित छन् । उनले पछिल्लो समय बहसमा ल्याएको ‘नेपालका कम्युनिष्टहरुको सैद्धान्तिक आधार र आगामी कार्यदिशा ’ एमाले मात्र होइन माओवादी केन्द्रले समेत आत्मसाथ गरेको छ । नेपालमा पुँजीवादको चरित्र : कम्युनिष्ट पार्टीहरुमाथि पछिल्लोपटक उपमहासचिव भूषालले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । केहीदिनअघि काठमाडौंको हादिएक होटलमा नेपाल अध्यन केन्द्रले गरेको नेपालका पुँजिवादको चरित्र विषयक कार्यक्रममा पेश गरेको कार्यपत्रको दोश्रो अंश ।
पुँजीको चरित्र : माक्र्सको पद्धतिका दुई अवधारणा
पुँजीको अध्यययन गर्ने क्रममा माक्र्सले अनेकौँ रुपका पुँजी उल्लेख गरेका छन् जस्तै–द्रव्य पुँजी, उत्पादक पुँजी, औद्योगिक पुँजी, माल पुँजी, व्यापारिक पुँजी, बैँक पुँजी आदि । त्यसमध्ये, पुँजीवादी व्यवस्थाको अध्ययनका लागि, औद्योगिक पुँजी आधारभूत महत्वको विषय हो । सामान्यतया के भन्न सकिन्छ भने माक्र्सले व्याख्या गरेको पुँजी मूलतः औद्योगिक नै हो । उनले आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘पुँजी’ का सबै खण्डमा त्यसकै वरिपरी व्याख्या गरेका छन् । हामीले यस रचनामा नेपालको वर्तमान पुँजीवादको मूलभूत चरित्रको अध्ययन गर्न माक्र्सका साधारण तथा विस्तारित पुनरुत्पादन र औद्योगिक पुँजीको परिपथ सम्बन्धी व्याख्यालाई आधार बनाएका छौँ । पुँजीको साधारण र विस्तारित पुनरुत्पादनको विश्लेषणले अर्थतन्त्रका समस्याको जरोमा पुग्न सजिलो बनाउने छ भने औद्योगिक पुँजी सम्बन्धी माक्र्सको व्याख्याले हाम्रो मुलुकको पुँजीको चरित्र पहिचान गर्न सजिलो बनाउने छ ।
क.पुँजीको साधारण र विस्तारित पुनरुत्पादन
पुँजी उत्पादन प्रक्रियाका दुइवटा चरण हुन्छन्– साधारण पुनरुत्पादन र विस्तारित उत्पादन । पुँजीले उत्पादनको हरेक चरणमा एउटा निश्चित परिमाणमा नाफा कमाउँछ तर अर्को चरणको उत्पादनभन्दा अगाडि नै त्यो नाफाको सबै अंश आफ्नो उपभोग र ज्याला आदिमा खर्च हुन्छ र त्यही प्रक्रिया दोहोरिइ रहन्छ भने त्यसलाई माक्र्सले साधारण पुनरुत्पादन भन्छन् । यस अन्तरगत हरेक पटक उत्पादन त हुन्छ तर नीजी उपभोगमै सकिन्छ, पुनः लगानी गर्दा पनि त्यही परिमाणमै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस्तै, एउटा पुँजीपतिले रु १००० लगानी गरेर एउटा उद्यम शुरु ग¥यो र अन्त्यमा रु ५०० उत्पादन ग¥यो, त्यसरी उसको लगानीको मूल्य रु १५०० भयो । त्यसमध्ये रु १५० उसले श्रमिकलाई ज्याला दियो र लगानीको व्याज सहित रु ३५० आफ्नो नीजी उपभोगका लागि खर्च ग¥यो (अर्को अर्थमा नाफा पुरै खर्च गर्यो) भने उसँग फेरि रु १००० नै बाँकि रहन्छ । उसले फेरि त्यो रु १००० लगानी गरेर उत्पादन गर्छ र रु १५०० पु¥याउँछ । अर्को पटक पनि रु १५० ज्याला र रु ३५० आफ्नो नीजी उपभोगका लागि खर्च गर्छ । यहि क्रम पाँच वर्ष चलिरह्यो भने के देखिन्छ भने उसँग अझै पनि रु १००० बाँकि नै छ । झट्ट हेर्दा के देखिन्छ भने उसलाई केही पनि नाफा भएकै छैन किनकि उसँग आरम्भमा जुन पुँजी थियो त्यही नै बाँकि छ । तर त्यसको वास्तविकता अर्कै हुन्छ । पाँच वर्षपछि पनि उसँग रु १००० बाँकि नै छ, त्यस बाहेक उसले रु ७५० श्रमिकलाई ज्याला दिएको हुन्छ र रु १७५० निजी उपभोगमा खर्च गरिसकेको हुन्छ । अर्थात् उसको रु १००० बाँकि नै रहँदा पनि पाँच वर्षमा ज्याला र नीजी उपभोगमा रु २५०० खर्च भैसकेको थियो । उसँग नाफा बाँकि नरहे पनि ज्याला र नीजी उपभोगमा खर्च भएको रु २५०० बढी उत्पादन हो । यसरी नाफा भैरहेको हुन्छ तर पुँजीको मात्रा बढ्दैन भने त्यो साधारण पुनरुत्पादन हुन्छ । यसलाई आधुनिक व्यवस्थापनको भाषामा ‘न नाफा न घाटाको अवस्था’ भनिन्छ ।
अर्कोतर्फ, विस्तारित पुनरुत्पादनमा चाहिँ उत्पादनको हरेक चरणमा पुँजीको उत्पादन बढी हुँदै जान्छ । मानौँ त्यही व्यक्तिले आफुसँग भएको रु १००० फरक परिवेशमा लगानी ग¥यो र अन्त्यमा रु ५०० उत्पादन ग¥यो । त्यसमध्ये रु १५० ज्याला दियो, रु २५० नीजी उपभोगमा खर्च ग¥यो भने उसँग अब रु ११०० बाँकि भयो । माथि भनिएको साधारण पुनरुत्पादनको क्रममा उसँग हरेक नयाँ चरणको लगानीका लागि रु १००० मात्रै हुन्थ्यो भने अब पहिलेको रु १००० मा १०० थपियो । अर्थात्, पहिलो वर्ष रु १०० (१० प्रतिशत) बढी नाफा भयो । अब हरेक वर्षको नाफामा १० प्रतिशत नाफा जोडिँदै जान्छ र पाँच वर्षको अन्त्यमा उसँग जम्मा रु १६१० हुन्छ । यसरी पाँच वर्षमा उसले आफ्नो शुरुको लगानी (रु १०००) व्यवसायबाट झिकेर पनि अब त्यही व्यवसायबाट आर्जन गरेको पुँजी रु ६१० रहन्छ । यस्तो प्रक्रियालाई माक्र्सले विस्तारित पुनरुत्पादन भनेका छन् ।
माक्र्सको विश्लेषणअनुसार औद्योगिक पुँजी भनेको द्रव्य पुँजी, उत्पादक पुँजी र माल पुँजीको समष्टी हो । यो द्रव्य पुँजी, उत्पादक पुँजी र माल पुँजीको निरन्तर चलिरहने चक्रका रुपमा रहन्छ । कुनै पुँजीपतिसँग रहेको द्रव्य उसले नाफा कमाउने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ र श्रमशक्तिको खरिदमा लगाउँछ भने त्यो लगानी द्रव्य पुँजी हुन्छ । त्यसपछि त्यो लगानी उत्पादन प्रक्रियामा रहन्छ जसलाई माक्र्स उत्पादक पुँजी भन्छन् । उत्पादन प्रक्रियाको अन्त्यमा पुँजीपतिको लगानी मालका रुपमा तयार हुन्छ, त्यो माल पुँजी हो । माल बिक्री गरेपछि पुँजीपतिले फेरि द्रव्य नै प्राप्त गर्छ । यसरी प्राप्त हुने द्रव्य पहिलेको द्रव्य पुँजीभन्दा बढी हुन्छ । उत्पादनको प्रक्रियामा पुँजी यसरी हिँड्छ र विभिन्न परिचय धारण गर्छ, जारी रहन्छ ।
यसलाई उदाहरणका साथ छलफल गरौँ :
यस हिसाबले औद्योगिक पुँजी निर्माणको बाटो र प्रक्रिया यस्तो हुन्छ :
द्र –मा ?श्र उ सा ….उ.. माΔ – द्रΔ
अर्थात् औद्योगिक पुँजीको मूलबाटो तीनवटा चरणबाट गुज्रिन्छ :
दोश्रो चरणमा पुँजीपतिले श्रम बजारबाट श्रमशक्ति र माल बजारबाट उत्पादनका साधन किन्छ र उत्पादनमा लगाउँछ, (मा ?श्र उ सा ….उ.. ) यो उत्पादक पुँजीको चरण हो, र
तेश्रो चरणमा पुँजीपति फेरि बजारमा जान्छ तर अहिले बिक्रेताका रुपमा जान्छ, (माΔ – द्रΔ) यो माल पुँजीको चरण हो ।
पुँजीका यी प्रत्येक चरणका हिसाबले तिनीहरुको आआफ्नै चक्र हुन्छ । जस्तै द्रव्य पुँजीलाई पुँजीको परिचलनको आरम्भ मान्ने हो भने त्यो द्र –मा ?श्र उ सा ….उ.. माΔ – द्रΔ हुन्छ । द्रव्य पुँजी उत्पादक पुँजी र माल पुँजीका रुपमा रुपान्तरित भएर फेरि द्रव्य मै रुपान्तरित हुनु नै द्रव्य पुँजीको बाटो हो । द्रव्य पुँजी पहिलेभन्दा बढी भएर आउनका लागि उत्पादक र माल पुँजीका रुपमा परिवर्तित हुँदै आउनु पर्छ । उत्पादक पुँजीका रुपमा पनि पुँजीको चक्र उ…मा–द्र– …उ हुन्छ अर्थात् उ बाट शुरु हुन्छ र उ मै अन्त्य हुन्छ । किनकि उत्पादक पुँजीले आफुलाई माल र द्रव्यका रुपमा परिवर्तित गरेर मात्रै अझ बढी उत्पादनको लागि आफुलाई तयार गर्छ । त्यही कुरा माल पुँजीमा पनि लागु हुन्छ अर्थात् द्रव्य र उत्पादक पुँजीका रुपमा मालले आफुलाई रुपान्तरण गरेपछि बढी मालका रुपमा आफुलाई अगाडि ल्याउँछ ।
पुँजीका तीनवटा चरण वा रुप (द्रव्यरुप, उत्पादक र मालरुप) मध्ये द्रव्य पुँजीको मालमा रुपान्तरण वा माल पुँजीको द्रव्य पुँजीमा रुपान्तरण हुँदा तिनीहरुको रुपमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । जस्तै द्रव्य मालमा फेरिनु र माल द्रव्यमा फेरिनु तिनीहरुको विनिमय मात्रै हो । तर उत्पादक पुँजीको चरण भने ती दुवैभन्दा फरक छ । यस चरणमा उत्पादनका साधन र श्रमशक्तिको संसर्गबाट पहिलेभन्दा बढी माल उत्पादन हुन्छ । त्यही बढी माल बढी द्रव्यका रुपमा बिक्री हुन्छ । सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने मूल्य उत्पादनको वास्तविक चरण यहि हो । यदि श्रमशक्ति स्वयं मालका रुपमा उपभुक्त हुँदैनथ्यो भने बढी मालका रुपमा देखा पर्दैनथ्यो । बढी माल नभएपछि बढी द्रव्यको कुरै हुँदैनथ्यो र पुँजी उत्पादनको कुरै हुँदैनथ्यो । त्यस हिसाबले यो चरण नै वास्तविक पुँजी उत्पादनको चरण हो ।
तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने उत्पादक पुँजीको चरण सार्थक हुनका लागि त्यसले माल र द्रव्य पुँजीको रुपमा भ्रमण गर्नै पर्छ । उत्पादक पुँजीको रुप लिनुभन्दा पहिले द्रव्यका रुपमा पुँजीले उत्पादनका साधन र श्रमशक्तिको खरिद गर्नु पर्छ । जब मालका रुपमा तयार हुन्छ त्यसले फेरि द्रव्य पुँजीका रुपमा रुपान्तरित हुनु पर्छ र फेरि अर्को चरणको उत्पादन शुरु हुन्छ । यसरी हेर्दा द्रव्य पुँजी र माल पुँजीका रुपमा पुँजीको गति भ्रमण वा यात्राका रुपमा हुन्छ । अर्थात् पुँजी परिचलनको बाटोबाट तिनीहरु गुज्रिन्छन्, हिँड्छन् मात्रै । तर उत्पादक पुँजीका रुपमा मूल्यले आफैलाई विस्तार गर्छ, आत्म विस्तार हुन्छ अर्थात् वास्तविक पुँजीको विस्तार हुन्छ ।
झट्ट हेर्दा पहिलेभन्दा बढी नाफाका रुपमा बढी द्रव्य आएको देखिन्छ र के भ्रम पर्छ भने द्रव्य स्वयं नै बढेर आउँछ । त्यस्तै माल पुँजी पनि बढेको देखिन्छ । तर माल पुँजीका रुपमा हामीसँग जुन उपयोग मूल्य हुन्छ द्रव्यका रुपमा त्यही नै विनिमय मूल्य हो । माललाई द्रव्यमा विनिमय गर्दा वा द्रव्यलाई मालमा विनिमय गर्दा त्यसमा कुनै नयाँ चीज थपिएको हुँदैन । यदि थपिएर आउँछ भने त्यो उत्पादक पुँजीको चरणमा मात्रै थपिएर आउँछ । त्यस्तै द्रव्य पुँजी जब मालका रुपमा देखा पर्छ त्यसबेला उत्पादनका साधन र श्रमशक्तिका रुपमा द्रव्यको रुपान्तरण मात्रै हुन्छ । त्यो आफैमा मूल्यको विस्तार होइन । संक्षेपमा, मूल्यको विस्तार केवल उत्पादक पुँजीको चरणमा हुन्छ जहाँ श्रमशक्ति माल मूल्यका रुपमा वा उपयोग मूल्यका रुपमा थपिन्छ र द्रव्य पुँजीका रुपमा विनिमयका लागि बजार जान्छ । यसरी मूल्यले आफैलाई विस्तार गर्ने चरित्र भएको हुँदा उत्पादक पुँजीको चरण नै पुँजी निर्माणको वास्तविक चरण हो ।
श्रमशक्ति मालमा रुपान्तरण हुने क्षण उत्पादन प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण हो । यस हिसाबले पुँजीवादी उत्पादनको सार उत्पादक पुँजीको चरण हो । किनकि यस प्रक्रियामा मात्रै श्रमिकको श्रमबाट अतिरिक्त मूल्यको सिर्जना हुन्छ र पुँजी निर्माणको बृद्धिको ग्यारण्टी हुन्छ । श्रमिकको श्रमशक्ति र उत्पादनका साधनको संसर्गले मूल्य जन्मिने भौतिक अवस्था बन्छ, श्रम सार्थक बन्ने परिस्थिति बन्छ । तात्विक रुपमा हेर्दा श्रमिक र पुँजीपति दुवै मालिक नै हुन् । श्रमिक श्रमशक्तिको मालिक हो भने र पुँजीपति उत्पादनका साधनको मालिक हो । तर पुँजीपति उत्पादनका साधनको मालिक हुने र उत्पादनका साधन विना श्रमशक्ति सार्थक नहुने हुुँदा उत्पादनका साधानको अभावमा श्रमिक आफ्नै मालसँग वियुक्त हुन्छ, अलगावमा रहन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने श्रमिक स्वयं श्रमशक्तिका रुपमा मालको मालिक हो तर श्रम शक्तिका रुपमा उसको माल (श्रम) सार्थक हुनका लागि ऊ स्वयं श्रमको विक्रेताका रुपमा पुँजीपतिलाई आफ्नो श्रम बेच्नु पर्छ, पुँजीपतिको उत्पादनका साधनमा श्रम लगाउनु पर्छ । त्यसरी श्रमिक नै बेशी मूल्यको श्रोत हुनका लागि जुन भौतिक परिस्थिति आवश्यक पर्छ उत्पादनका साधनले त्यस परिस्थितिको निर्माण गर्छ । त्यस्तो भौतिक परिस्थिति भनेको श्रमशक्तिको खरिदकर्ता र विक्रेता (श्रमिक) भेट हुने परिस्थिति हो । यसरी श्रमशक्तिको क्रेता र विक्रेताका रुपमा क्रमशः पुँजीपति र मजदुर वर्ग सहअस्तित्वमा आउँछन् ।
माथि भनिएझैँ, माक्र्सले औद्योगिक पुँजीका तीन चरणको व्याख्या गरे । त्यस अनुसार एउटालाई उनले द्रव्य पुँजी भने, दोश्रोलाई उत्पादक पुँजी भने र तेश्रोलाई माल पुँजी भने । उनले दोश्रोलाई उत्पादक पुँजी भन्नुको कारण के थियो भने त्यो चरणनै वास्तविक पुँजी उत्पादनको चरण हुन्छ । पहिलो र दोश्रो चरणमा पुँजी डुल्छ मात्रै, त्यहाँ केही पनि थपिन्न । तर ती दुई चरणले पुँजीलाई उत्पादक बन्ने अवस्था तयार गर्छन् त्यसैले ती दुई चरण पनि पुँजीको उत्पादनका लागि आवश्यक चरण हुन्, औद्योगिक पुँजीका आवश्यक सहयोगी चरण हुन् भन्ने उनको व्याख्या थियो । किनकि, माक्र्स व्याख्या गर्छन्, उत्पादक पुँजी पनि द्रव्य र माल पुँजीको बाटो भएरै अगाडि बढ्छ । यसैलाई उदाहरणका रुपमा हेरौँ, यदि द्रव्यलाई मालमा रुपान्तरण गरेर त्यो माललाई फेरि द्रव्यमा रुपान्तरण गर्ने कुनै माल व्यापारी छ भने त्यस व्यापारीले लगाउने पुँजी कुनै न कुनै औद्योगिक पुँजीपति कहाँ पुगेर उत्पादक पुँजी बन्नेछ ।
त्यस्तै द्रव्यलाई ब्याजमा लगाएर बढी द्रव्य प्राप्त गर्ने कुनै ऋणदाता छ भने उसले दिएको द्रव्य पनि कुनै न कुनै पुँजीपति कहाँ पुगेर उत्पादक पुँजीको रुप धारण गर्नेछ । त्यस अर्थमा व्यापारिक पुँजी वा ब्याजी पुँजी पनि उत्पादक पुँजीको सहयोगी नै हुन्छन् भन्ने माक्र्सको व्याख्या हो । सङ्क्षेपमा, पुँजीको चरित्र नै अनुत्पादक बन्छ भन्ने बारेमा माक्र्सले चर्चा गरेनन् तर अनुत्पादक चरण हुन्छ भन्ने व्याख्या गरे ।
पुँजीको केन्द्रिकरण, अझ खासगरी ब्याङ्क पुँजी र औद्योगिक पुँजीको सम्मिलनले वित्तिय पुँजीको विकास हुन्छ भन्ने विषयमा अष्ट्रियाली–जर्मन अर्थशास्त्री रुडोल्फ हिल्फर्डिङ्ले विषद व्याख्या गरे ( हिल्फर्डिङ्, वित्तिय पुँजी : पुँजीवादी विकासको अन्तिम अवस्थाको एक अध्ययन) । उनले त्यस्तो एकाधिकारी साम्राज्यवादी पुँजीले अन्य साना पुँजीमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गरेको शोधलाई आधार बनाएर लेनिनले तात्कालिन पुँजीवादको युद्धोन्मादी चरित्रको चरित्रको चर्चा गर्दै त्यसले कसरी युद्ध निम्त्याउँछ भन्ने विषयमा जोड दिए । सङ्क्षेपमा, एकाधिकारको लागि लुछाचुँडी साम्राज्यवादको मुख्य चरित्र हो भन्ने कुरामा उनको जोड थियो (लेनिन, साम्राज्यवाद : पुँजीवादको चरम अवस्था) । तर पुँजी स्वयंको चरित्र खास अवस्थामा उत्पादकभन्दा अनुत्पादक हुन सक्छ भन्ने विषयमा लेनिनसमेत प्रवेश गरेनन्, बरु उक्त निष्कर्षमा चीनियाँ कम्युनिष्टहरु नै छिटो पुगे ।
माओले दलाल पुँजीपतिलाई एउटा प्रतिक्रियावादी वर्गको रुपमा उल्लेख गरे । त्यस बेला पश्चिमका पुँजीपतिहरुले उपनिवेशहरुमा ब्यापार प्रवन्ध गर्न र आवश्यक प्रशाषनिक काम गर्न आफ्ना प्रतिनिधि राख्थे । ती प्रतिनिधिहरुलाई दलाल भनिन्थ्यो । साम्राज्यका पक्षमा काम गर्ने विचौलियाहरु क्रमशः ती मुलुकमा ठूला व्यापारी बन्दै गए । त्यो व्यापारिक वर्गले साम्राज्यवादी बजार विस्तार गर्न र उपनिवेशको औद्योगिकरणलाई रोक्न सघाउने भएकाले त्यस्तो पुँजीको चरित्र प्रतिक्रियावादी हुन्छ भन्ने व्याख्या माओत्सेतुङ् र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले गरे । त्यसपछि यो अवधारणा विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सङ्गठन विश्वव्यापि भयो र कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजमा सबै खालका विदेशी लगानी वा पुँजीलाई दलाल पुँजी भन्न थालियो ।
आर्थिक विकासका पछिल्ला अनुभव र अर्थशास्त्रीय अवधारणाहरुका आधारमा प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री समिर अमिनले दलाल पुँजीको परिभाषा निम्नानुसार गरेका छन् ः ‘पुँजीपति वर्गले आफुलाई न्यूनतम स्वतन्त्रताका साथ उत्पादक शक्तिको विकास गर्न सक्ने प्रभावशाली राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न उसले उत्पादन शक्ति अर्थात् कृषि–उद्योग सम्बन्धको राष्ट्रिय पुनरुत्पादन र पुँजी सङ्कलनको परिपथमा नियन्त्रण गर्नै पर्छ, यदि त्यसो गर्न सक्दैन भने त्यो दलाल बन्छ र उसबाट अपेक्षा गरिएको ऐतिहासिक भूमिका पूरा हुँदैन ।’
आउनुहोस्, माक्र्सको विश्लेषण पद्धतिकै आधारमा माओ र समिर अमिनका परिभाषामाथि छलफल गरौँ :
वास्तविक पुँजी कुनै न कुनै रुपमा उत्पादक पुँजीको चरणबाट गुज्रिन्छ त्यसैले पुँजीको मूल चरित्र औद्योगिक हुन्छ भन्ने माक्र्सको विश्लेषण थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । दोश्रो, उत्पादक पुँजीको चरणमा मात्रै नयाँ मूल्य थपिन्छ अर्थात् वास्तविक उत्पादनको काम हुन्छ । तेश्रो, हामीलाई यो पनि थाहा छ कि उनले त्यो औद्योगिक पुँजी द्रव्य पुँजी, उत्पादक पुँजी र माल पुँजीका रुपमा भ्रमण गर्छ जुन चरणमा नयाँ मूल्य थपिँदैन अर्थात् त्यस चरणमा उत्पादन हुँदैन भन्ने व्याख्या गरेका छन् । यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ भने औद्योगिक पुँजीको मुख्य उद्भव उत्पादक पुँजीको चरणमा हुन्छ अन्य दुई चरणमा उत्पादन हुँदैन । त्यस अर्थमा व्यापारी पुँजी र व्याजी पुँजी आफैमा उत्पादक होइनन् । त्यस अर्थमा ती दुइवटा चरण उत्पादन नहुने चरण हुन्, ती चरण पुँजीको डुल्ने चरण हुन् । उत्पादक पुँजीको चरण बाहेक अन्य चरण पुँजी डुल्ने चरण भएकोले ती सबै चरणको पुँजीलाई हामीले ‘डुलुवा पुँजी’ भन्न पनि सक्छौँ ।
पुँजीको अनुत्पादक वा ‘डुलुवा’ चरित्रलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ :
पुँजी परिचलनका तीन चरणमध्ये पहिलो चरणमा द्र–मा हुन्छ अर्थात् द्रव्य पुँजी मालमा रुपान्तरित हुन्छ । माक्र्सले व्याख्या गरेको प्रक्रिया अनुसार उक्त माल उत्पादक प्रक्रियामा जान्छ र त्यहाँ रहुन्जेल त्यो उत्पादक पुँजीका रुपमा रहन्छ र फेरि माल पुँजीमा रुपान्तरित हुनु पर्ने हो । तर पुँजी त्यो बाटो नहिँडेर अर्कै बाटो हिँड्न सक्छ । द्रव्य पुँजीले उत्पादक पुँजीको बाटो नहिँडेर सोझै माल पुँजीको बाटो समाउन सक्छ अर्थात् द्र–मा, मा–द्र हुन्छ । पुँजीपतिले आफ्नो द्रव्यलाई मालमा रुपान्तरित गर्छ र फेरि माल बेचेर पहिलेभन्दा बढी द्रव्य प्राप्त गर्छ वा द्र लाई मालमार्फत् द्रΔ बनाउँछ । यो प्रक्रिया समग्रमा द्र –मा – द्रΔ¬ हुन्छ । माथि भनिएको पुँजीको तेश्रो चरण पनि अर्थात् मा– द्र पनि फेरि द्रΔ–माΔ हुँदै बढ्दै जान सक्छ । यो चाहिँ पहिलो चरणकै पुनरुक्ति जस्तो हुन्छ ।
यस्तो पुँजीलाई हामीले ब्यापारिक पुँजी भन्छौँ । जस्तो कि कुनै ब्यापारीले माल खरिद गर्छ र फेरि बिक्री गर्छ । एक अवस्थामा उ क्रेता हुन्छ भने अर्को अवस्थामा विक्रेता हुन्छ । उसको पुँजीको परिचलन द्र–मा–द्रΔ हुँदै बढ्दै जान्छ । व्यापारीको कोणबाट हेर्दा यहाँ उत्पादक अवस्थामा नगैकन द्रव्य पुँजी र माल पुँजी बढीरहेको हुन्छ । जस्तै ः कुनै व्यापारीले कुनै कारखानाबाट माल किनेर ल्यायो र उपभोक्तालाई बेच्यो र फेरि फेरि त्यही क्रम दोह¥याई रह्यो भने व्यापारीको कोणबाट हेर्दा द्र–मा– द्रΔ–माΔ हुँदै जान्छ । यसैलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ ः यदि कुनै मालको विक्रीको श्रृङ्खला लामो छ र औद्योगिक पुँजीपतिले भन्दा ब्यापारिक पुँजीपतिले नाफा बढी लिन्छन् भने सामाजिक पुँजीको त्यो चरित्र अनुत्पादक हुन्छ । जस्तै, क ख ग घ ङ मध्ये क उत्पादक हो, ङ उपभोक्ता हो र ख ग घ चाहिँ ब्यापारी हुन् भने त्यस्तो अवस्थामा नाफाको अंश उत्पादकभन्दा व्यापारीहरु कहाँ पुग्न सक्छ । त्यस अवस्थामा सामाजिक पुँजीको बढी हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ ।
त्यस्तै, द्रव्यको लगानी मात्रै गरेर (ऋण दिएर) पनि पुँजीपतिले द्र – द्रΔ बनाउन सक्छ । उदाहरणका रुपमा हेरौँ ः प्रथमतः द्रव्यको कुनै मालिक क ले अर्को मूल्य उत्पादन गर्न चाहाने व्यक्ति ख लाई ऋणका रुपमा द्रव्य दिन्छ । त्यसबाट ख ले उत्पादक प्रक्रियामा लगानी गर्छ, माल तयार गर्छ र बजारमा बिक्री गरेर द्रव्य प्राप्त गर्छ, बढी द्रव्य प्राप्त गर्छ । यसरी प्राप्त भएको बढी द्रव्यमध्ये एउटा हिस्सा आफुले राखेर क लाई ब्याज सहित भुक्तानी गर्छ । यसरी क सँग भएको द्रव्यले उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिँदैन बरु ख कहाँ पुगेपछि मात्रै त्यो उत्पादक प्रक्रियामा जान्छ । यसरी क ले उत्पादन प्रक्रियामा नगैकन नाफा खान्छ । वस्तुतः उसले त्यो द्रव्यको कूतका रुपमा प्राप्त गर्छ । ब्याज वास्तविक नाफाको एक अंश मात्रै हो । किनकि मालको मूल्यमा ब्याजले तात्विक फरक पार्दैन बरु ती दुवैले उत्पादक र ऋणदाताले नाफा बाँडेर लिन्छन् । ब्याङ्क पुँजीले यसरी काम गर्छ ।
पुँजीलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र राखेर छलफल गर्दा यी उदाहरणहरु अझ प्रष्ट हुन्छ । कुनै एउटा मुलुकको औद्योगिक पुँजीले अर्को मुलुकमा केवल व्यापारिक पुँजीलाई बढाउने काममा सहयोग गर्न सक्छ । खासगरी पराश्रित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा अर्को मुलुकको माल ल्याएर बिक्री गर्ने र नाफा गर्ने पुँजीको चरित्र त्यस्तो हुन सक्छ । विश्वव्यापि खुला बजार बनेको अहिलेको दुनियाँमा कुनै एउटा क मुलुकको उत्पादन ख ले खरिद गर्छ भने ख को उत्पादन पनि क ले खरिद गर्छ । ती दुवै मुलुकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गर्ने पुँजीको चरित्र उत्पादक हुन्छ भने त्यही उत्पादनले अर्को मुलुकमा अनुत्पादक पुँजीको काम गर्छ ।
नेपाल र भारतीय वा नेपाल र चिनियाँ मालको बजार दुवै मुलुक बनेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा उत्पादन भएर चीनमा बिक्रि हुने मालले नेपालमा उत्पादक पुँजीको भूमिका खेल्छ भने त्यही मालले चीनमा अनुत्पादक वा व्यापारीक पुँजीको काम गर्छ । यसरी एउटा मुलुकको सबै पुँजी उत्पादक र अर्को मुलुकको सबै पुँजी अनुत्पादक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पुँजीको चरित्रको व्याख्या गर्दा कूल सामाजिक पुँजी अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीको मुख्य चरित्रको व्याख्या गर्नु पर्छ । यसरी हेर्दा यदि कूल पुँजी मध्ये ठूलो हिस्सा आफ्नै मुलुकमा उत्पादक पुँजीको अवस्थामा पुग्छ भने त्यो मुलुकको पुँजीको मुख्य चरित्र उत्पादक वा औद्योगिक हो भन्नु पर्छ, यदि कूल पुँजीको मुख्य हिस्सा केवल द्रव्य–माल–द्रव्यको बाटो वा द्रव्य–द्रव्यको बाटो हिँड्छ भने त्यो मुलुकको पुँजीको मुख्य चरित्र अनुत्पादक भन्नु पर्ने हुन्छ । औद्योगिक पुँजीपतिको भागमा बढी नाफा पर्न जाँदा उत्पादक शक्तिको विकास तीब्र हुन्थ्यो भने अनुत्पादक पुँजीपतिको हातमा बढी नाफा जाँदा त्यो सम्भावना हुँदैन ।
माओत्सेतुङ्ले उल्लेख गरेको दलाल पुँजीपतिको पुँजीले चीनमा औद्योगिक पुँजीको भन्दा अनुत्पादक वा डुलुवा पुँजीको काम गथ्र्यो, उत्पादक शक्तिको विकास गर्दैनथ्यो त्यस अर्थमा उनले गरेको व्याख्या वस्तुगत थियो । समिर अमिनको परिभाषाले लगानी कुन मुलुकबाट भयो भन्ने कुरामा भन्दा उद्योगले कृषिलाई निरन्तर औद्योगिकरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छ, यदि त्यसो गर्दैन भने त्यसको चरित्र दलाल हुन्छ भन्छ । हामीले पनि आजको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा सबै विदेशी पुँजी दलाल भनेर दुत्कार्नु उपयुक्त हुँदैन बरु त्यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । सङ्क्षेपमा, व्यापारी पुँजी वा ब्याजी पुँजी (ब्याङ्क पुँजी) आफैमा दलाल वा राष्ट्रिय हुँदैन बरु त्यो पुँजीले उत्पादक पुँजीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो औद्योगिक वा उत्पादक वा उद्यमशील पुँजी हो यदि त्यसो गर्दैन भने त्यो अनुत्पादक, दलाल वा डुलुवा पुँजी हो ।
नेपालको अर्थव्यवस्था : केही तथ्य र प्रवृत्ति :
 सन् १९६५ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत थियो र कृषिमा आधारित जनङ्ख्या ८१ प्रतिशत थियो । त्यसको ५० वर्षपछि २०१५ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा आउँदा कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या केवल १५ प्रतिशतले घटेर ६६ प्रतिशतमा आएको छ ।
 अर्कातिर त्यही ५० वर्षको अबधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतबाट जम्मा ६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यो पनि गएको २५ वर्षदेखि ६ प्रतिशतमै सीमित छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान र निर्माण क्षेत्र (खासगरी हाउजिङ्) को योगदान करिब बराबर छ (क्रमशः रु ४३ अर्ब ३२ करोड र ४१ अर्ब ६६ करोड) । अर्कातिर सेवा क्षेत्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएका होटल तथा रेष्टुरेण्टको जम्मा योगदान १२ अर्ब १८ करोडमात्रै छ ।
 व्यापार सन्तुलनको चित्र उस्तै निराशाजनक छ । सन् १९६५ मा हाम्रो जम्मा निर्यात ४३ करोड ५० लाख रु थियो भने आयात ७८ करोड थियो अर्थात् ३४ करोड ब्यापार घाटा थियो जुन जम्मा निर्यातको ७९ प्रतिशत हुन्छ । सन् १९९० मा त्यो घाटा १०६ प्रतिशत पुग्यो अर्थात् निर्यात करिब ११ अरब रु पुग्दा आयात २२ अरबभन्दा बढी भयो ।
 अझ नराम्रो चित्र के छ भने त्यसपछिका २५ वर्षमा ब्यापार निर्यात करिब साढे दुइ खर्ब रुपियाँ पुग्दा आयात ८ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो, अर्थात् जम्मा निर्यातको २५७ प्रतिशत व्यापार घाटा पुग्यो । त्यति बढी व्यापार घाटा भएको अवस्थामा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापारको योगदान (कूल आयात र निर्यातको योगदान) जम्मा ५३ प्रतिशत छ । यो विश्वव्यापीकरणको समयमा पनि अर्थतन्त्रमा व्यापारको यति सानो योगदान रहनु उदारवादका प्रवक्ताहरुका लागि चुनौतिको विषय हुनु पर्ने हो ।
 श्रमशक्तिको पलायन जुन अनुपातमा बढ्दैछ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा जसरी विप्रेषणको मात्रा बढ्दैछ त्यो आफैमा चिन्ताजनक छ । सन् २००९÷१० देखि २०१३÷१४ सम्म ५ वर्षमा बीस लाखभन्दा बढी नेपालीहरु कामका लागि विदेशिएका छन् । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार अहिले जम्मा ५६ प्रतिशत घरधुरीबाट एक वा बढी सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् र हाम्रो राष्ट्रिय आयमा ३२ प्रतिशत भन्दा बढी विप्रेषणको योगदान छ । तर त्यसको केवल २ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । अर्को निराशापूर्ण तथ्य के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष, २५ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ प्रतिशतमात्रै दक्ष छन् ।
 अर्कातर्फ, सन्दर्भवस भन्ने हो भने, हाम्रो वरिपरी अजङ्गका परिवर्तनहरु भएका छन् । सन् १९६० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २६७ डलर हुँदा भारतको ३१७ र चीनको १८९ मात्रै थियो । त्यसको तीस वर्षपछि १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३५७ पुग्यो जबकि भारतको ५५९ र चीनको ७२६ डलर पुग्यो । सन् २०१५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६९० हुँदा भारत र चीनको क्रमशः १८०५ र ६४१६ डलर पुगेको थियो । यी तथ्यकै आधारमा गरिएको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२५ मा नेपाल १६२८ लडरमै रहँदा भारत ४२६३ र चीन १५१४५ डलर प्रतिव्यक्ति आयमा पुग्दैछन् । यसले हाम्रो र हाम्रा छिमेकिहरुको उत्पादक शक्तिको विकासको अवस्थालाई बताउँछ ।
 राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान निरन्तर र तीब्ररुपमा घट्नु तर कृषिमा आधारित श्रमशक्ति असाध्यै कममात्रै घट्नु; उत्पादक पुँजीको विकासको सबैभन्दा मुख्य सूचक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान गएको ५० वर्षमा ३ प्रतिशतमात्रै बढ्नु, गएको २५ वर्षमा त्यो ज्यूँका त्यूँ रहनु; सेवाका पनि बढी उत्पादक क्षेत्रमाभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बृद्धि देखिनु; व्यापार घाटाको दर निरन्तर बढिरहनु; उत्पादक श्रम विदेशिनेक्रम बढ्दै जानु र अर्थतन्त्रमा विप्रषणको मात्रा बढ्दै जानु तर त्यसको पनि उत्पादक खर्च नगन्य हुनुजस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको अनुत्पादक र साधारण पुनरुत्पादनमुखी (गुजारामुखी) अवस्थालाई नै बताउँछन् । माथि उल्लेख गरिएका उत्पादक र अनुत्पादक पुँजी तथा साधारण र विस्तारित पुनरुत्पादनका सैद्धान्तिक ढाँचामा उपरोक्त तथ्याङ्कहरुलाई राखेर हाम्रो पुँजीको मुख्य चरित्र निरुपण गर्दा निम्न निष्कर्ष निस्कन्छन् :एक, उत्पादक पुँजीको विकासको तुलनामा अनुत्पादक पुँजीको विकास भएको छ, दुई– उत्पादक पुँजीको विस्तारित पुनरुत्पादन भएन त्यसका तुलनामा साधारण पुनरुत्पादनको दर नै कायम रह्यो ।
 उद्यमशीलताको निरन्तर विकास नगर्ने वा औद्योगिक पुँजीको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने पुँजीलाई ‘वित्तिय पुँजी’, ‘क्रोनी पुँजीवाद’, ‘कूतखोर पुँजीवाद’ (चभलतष्भच अबउष्तबष्किm) आदि नाम दिने गरिएको छ । तर ‘वित्तिय पुँजी’ ले यसको उत्पादक शक्तिलाई क्षय गर्ने चरित्रलाई बताउँदैन । ‘क्रोनी पुँजीवाद’ ले मूलतः नातेदारी र आफन्तवादलाई जोड दिन्छ । ‘क्यासिनो पुँजीवाद’ ले अर्थतन्त्रका खासखास अवस्थामा पुँजीपतिको जुवाडे चरित्रलाई बढी चित्रण गर्छ । ‘एकाधिकार पुँजीवाद’ ले स्वामित्वको रुपमा बढी जोड दिन्छ । वस्तुतः अनुत्पादक पुँजीको श्रोत श्रमशक्तिको विकास नगर्ने पुँजी हो । त्यसैले त्यसको आधारभूत चरित्र अनुत्पादक नै हो । व्यापारमा आधारित नाफा, व्याज वा सूदमा आधारित नाफा, राजनीतिक पार्टीका आडमा नेता–कार्यकर्ताहरुले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति, कर्मचारीले कमाउने सम्पत्ति, नातेदारीका आधारमा थुपार्ने सम्पत्ति मूलतः विचौलियाको भूमिकामा प्राप्त गर्ने नाफा हो । सम्पत्ति थुपार्ने यी सबै तरिकाहरुलाई, माक्र्सको उत्पादक पुँजीसम्बन्धी व्याख्या, चिनियाँ प्रयोगको ऐतिहासिकता र समिर अमिनको परिभाषा समेतका आधारमा नेपालको पुँजीवादलाई अनुत्पादक वा दलाल नै भन्न सकिन्छ ।
 के कुरा भनिरहनु पर्दैन भने पुँजीवादको विस्तार हुँदै जाँदा कृषिमा आधारित श्रमको मात्रा घट्दै जान्छ । पुँजीको चरित्र उत्पादक हुँदा जुन अनुपातमा कृषिश्रम विस्थापित हुँदै जान्छ त्यसै अनुपातमा औद्योगिक श्रम बढ्छ, उत्पादन बढ्छ । तर उत्पादक पुँजीको अभावमा जनसङ्ख्या विस्थापित हुँदै जान्छ तर उत्पादन बढ्दैन । जीवनको बजारीकरण जसरी दिनदिनै बढीरहेको हुन्छ त्यसलाई कृषिले थेग्न सक्दैन र जनसङ्ख्या नै विस्थापित हुनु पर्छ । वर्षभरी काम गरेर खान नपुग्ने वा मुस्किलले खानमात्रै पुग्ने भएपछि आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर बचत गर्ने र त्यस्तो बचतबाट पुँजी निर्माण गर्ने सम्भावना भएन । हाम्रो गरिबीलाई पनि यसरी नै हेर्नु पर्छ । परम्परागत कृषि श्रमलाई उद्यममा ल्याउन नसक्ने पुँजी दलाल हो भन्ने कुरा माथि नै चर्चा गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो गरिबीको मुख्य कारण पनि दलाल पुँजी हो ।
 बैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रमशक्ति मूलतः उद्यमसँग गाँसीएको छ तर त्यस्तो श्रमले त्यहीँकै उत्पादक शक्तिको विकासमा जति योगदान गर्छ त्यति यहाँको उत्पादक शक्तिको विकासमा गर्दैन, अतिरीक्त नाफा त्यही मुलुकमा रहन्छ । किनकि उत्पादक शक्तिको विकासका दौरानमा श्रमिकले अरु बढी श्रमिक, पुँजीले बढी पुँजी र उद्यमले अरु उद्यम जन्माउँदै जान्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको हाम्रो श्रमशक्तिले त्यहीँको श्रम, पुँजी र उद्यमको विकासमा सघाउँछ । त्यस्तै, हाम्रो सस्तो कच्चा पदार्थले पनि उतैको उत्पादक शक्तिको विकासमा सहयोग गर्छ ।
 दलाल पुँजीको विकासले मानिसलाई परम्परागत कृषिबाट उखेल्छ, पुराना सामाजिक सम्बन्धहरुबाट पनि स्वतन्त्र बनाउँछ । तर त्यो श्रमशक्ति उद्यममा जान नपाएपछि राजनीतिक अस्थीरताका लागि कारण बन्छ । हामीले २०४६ सालको क्रान्ति, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक उतार–चढाव र अहिलेको गणतन्त्रलाई समेत यो अर्थराजनीतिक सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ ।
 लामो समयदेखि दलाल पुँजीको उत्पादन–पुनरुत्पादनले राज्यलाई र क्रमशः समाजलाई पनि प्रभावित पार्दै लान्छ र दलाल अर्थराजनीतिक सामाजिक परिस्थिति बन्दै जान्छ । चुनावमा टिकट पाउने–जित्ने, कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालन, संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति, ऐन–कानूनहरुको निर्माण आदिद्वारा राज्य नै दलाल पुँजीको प्रभावमा पर्दै जान्छ र त्यो क्रमशः समाजको साँस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा सर्दै जान्छ । अहिले हाम्रो परिस्थितिलाई पनि यसरी नै हेर्नु वस्तुगत हुनेछ ।
 तर यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण चरित्र दलाल हो भन्ने होइन । अहिले केही क्षेत्रमा भएको व्यवशायिक कृषि, धर्मराएकै भए पनि औद्योगिक क्षेत्र , पर्यटन, उर्जा आदि क्षेत्रमा भएको पुँजी अर्थात् जुन पुँजीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ त्यस्तो पुँजी राष्ट्रिय पुँजी, उत्पादक पुँजी हो । कुरा कतिमात्रै हो भने उत्पादक वा राष्ट्रिय पुँजी कमजोर छ दलाल पुँजी बलियो छ ।
नयाँ जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद वा समृद्धिजस्ता उद्देश्य भएका पार्टी, नेता वा वुद्धिजीवीहरुले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई कसरी साधारण पुनरुत्पादनबाट कसरी विस्तारित पुनरुत्पादनमा लैजाने हो ? त्यसका लागि अहिलेको अनुत्पादक वा दलाल पुँजीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? त्यसका लागि अहिलेका सिद्धान्त, सङ्गठन र सङ्घर्षका रुपहरु कस्तो हुनु पर्छ ? उत्पादनका क्षेत्रमा हाम्रै छिमेकमा घटिरहेका विश्व ऐतिहासिक घटना र त्यसले बनेको वर्तमान भूअर्थ–राजनीतिक परिस्थितिलाई ती पार्टीहरुले कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? जस्ता प्रश्नहरुको वस्तुगत उत्तर दिनु पर्छ । ती प्रश्नको वस्तुगत उत्तर विना खोलिने पार्टी र गरिने गतिविधिले केवल सामाजिक शक्तिको क्षतिलाई बढाउँछन् । अर्कोतिर, ती प्रश्नको वस्तुगत उत्तर खोज्ने सार्थक प्रयत्न गर्ने हो भने नेपालमा एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण र समाजवादका लागि सार्थक योगदानका असाधारण सम्भावना छन् ।
 फेरि अन्त्यमा, माक्र्सको एउटा उक्ति :
नेकपा एमालेमा उपमहासचिव घनश्याम भुषाल एमालेका नेता...